မီးပြတိုက်: အတွေးမှတ်စုများ (၁၂)
မိုးကိုမျှော်ကြည့်ပါ။ ခြေထောက်နဲ့ မြေကြီးကို မလွတ်ပါစေနဲ့။
အဖြေတွေအားလုံးကို စာအုပ်ထဲမှာ ရထားတဲ့သူဟာ ဘ၀မှာ အဖြေရှာစရာ မလိုတော့ဘူး။
ခရီးရောက်ချင်ရင် ရပ်မနေဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ နှေးတာက အရေးမကြီးပါဘူး။
ပြဿနာတစ်ခုကို reasonable ဖြစ်တဲ့အမြင်ရှိမှပဲ ဖြေရှင်းလို့ရမယ်။ Unreasonable ဖြစ်နေရင် အဖြေမရှိဘူး။
ကြောက်စိတ်မှာ dignity မရှိဘူး။ ကြောက်အောင်ခြောက်နေတဲ့သူမှာကော dignity မရှိဘူး။
ခွင့်လွတ်တဲ့စိတ်ဟာ မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်၊ ရင့်ကျက်ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဖြစ်တယ်။ သဘောထား ကြီးတဲ့စိတ် (big mind/ magnanimous) ဖြစ်တယ်။ အင်အားကြီးတဲ့စိတ် (powerful mind) ဖြစ်တယ်။
လူတွေ လေးစားတာခံဖို့ personal integrity ရှိဖို့လိုတယ်။
အားငယ်တတ်တဲ့သူ အားလုံးဟာ ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး curative ဖြစ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို မရနိုင်ဘူး။
အချို့လူတွေနဲ့ တွေ့ရ၊ ဆက်ဆံ ရတဲ့အခါမှာ transformational relationship ဖြစ်လာတယ်။ လူ့ဘ၀မှာ တန်ဖိုး အရှိဆုံး အရာကို ရသလိုပဲ။ တန်ဖိုး ဖြတ်လို့ မရဘူး။
ဝေဖန်တာခံရတိုင်း ဒေါသဖြစ်တာဟာ မခိုင်မာတဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။ ချီးမွမ်းတိုင်း ၀မ်းသာ တတ်တဲ့သူ၊ ကဲ့ရဲ့တိုင်း စိတ်ဆိုး တတ်တဲ့သူဟာ စိတ်မနိုင်တဲ့သူ၊ စ်ိတ်မခိုင်တဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ဣနြေ္ဒမရဘူး။ dignity မရှိဘူး။
စည်းကမ်းနဲ့နေ၊ စည်းကမ်းနဲ့ ပြောတတ်၊ လုပ်တတ်တဲ့ သူဟာ အင်အားကြီးမားတယ်။ သြဇာရှိတယ်။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်း မြင့်သွားလေလေ သူ့ရဲ့ပြောပုံ ဆိုပုံဟာလည်း အဆင့်အတန်း မြင့်သွားလေပဲ။
ဘယ်သူမှ မလေးစားတော့တဲ့ သူဟာ အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲမှာ နေရာမရှိတော့တဲ့သူ ဖြစ်သွားပြီ။
ငါ့ကို ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူကို ငါခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒါ အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ လက်စားချေလိုက်တာပဲ။
Anonymous says 24 June 2008 at 09:02
Cho says 24 June 2008 at 09:03
Anonymous says 24 June 2008 at 09:06
slip ရေ အတွေးမှတ်စုတွေလာဖတ်သွားပါတယ်.
Anonymous says 24 June 2008 at 09:16
T.S says 24 June 2008 at 12:37
စီဘောက်လဲမရှိဘူးနော် ... ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ် ... :)
simpleyesa says 24 June 2008 at 14:58
hello... how wish i can understand the language. It's written in, umm, i don't know (hehe) but still i'd love to leaveacomment.
Thanks for visiting my blog. Come back again ok... and leave meacomment.
win zaw says 25 June 2008 at 07:26
ရွှေပြည်သူ says 25 June 2008 at 18:04
ဆရာတော် ဦးဇောတိကရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွေးမှတ်စုတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မောင်လေးရေ...
ဖရီးတော်ကာပါခင်ဗျ ။ says 27 June 2008 at 21:20
lite lite pi house nay dar lar? he he he :)
Anonymous says2July 2008 at 06:11
Anonymous says 13 November 2010 at 11:58
У меня есть Интернет Клуб http://www.2nt.ru/users/katya (Давайте вспомним беззаботность детства.. ) благодаря которому я наменрена помогать сохранять и улучшать здоровье людям.
Предлагаю Вам [b][url=http://soki.tv]секс знакомства протвино [/url][/b] и др, с огромным количеством информации по интересующей Вас теме. Для себя я обнаружила много интересного.
အားနည်းချက်မှန်သမျှအတွက် သီးသန့်ကုထုံးကိုယ်စီ ရရှိ...